Ingxaki yokurenta ikhaya eMelika | Ezezimali
Ingxaki yekhaya eliqeshisayo eMelika
UJose Manuel Vargas obambe umfanekiso | | indawo yokuhlala
Uninzi lwabantu baseMelika namhlanje abakwazi ukumelana ne Ukuqesha ikhaya. Amaxabiso aya esiya enyuka kwaye indawo elungileyo yale ngxaki inento yokwenza ngokukodwa nomdlalo wokubonelela kunye nemfuno. Izigidi zabemi zaphulukana namakhaya azo ngexesha Ubunzima bemali mboleko, anyanzelwa ukuba angene ngokupheleleyo kwimakethi yokurenta. Ngo-2004, ama-31% abantu baseMelika babeqesha. Namhlanje inani liyi-35%.
Ngokucacileyo ukuba uninzi lwabantu lungene kwimakethi yokurenta, kokukhona amaxabiso enyukile, kuba inani lamakhaya alikhulanga ukuze lihlangabezane neli bango likhulu. Kunye nengxubakaxaka yemali-mboleko, ukuwa kwezemali nokudodobala koqoqosho kuzise ukonyuka kwentswela-ngqesho kwaye, ngenxa yoko, ukuwa kwengeniso. Inxalenye elungileyo yezo zigidi zabantu baseMelika ibabonile kwaye banqwenela ukuba bakwazi ukujongana nerenti.
Njengokuba konke oku akwanelanga, iiRiphabhlikhi ziye zanciphisa inkcitho kwiinkqubo zomdibaniso, kubandakanya ukunceda ukufikelela kwikhaya. Phantse zonke iinkqubo zoncedo zikarhulumente ziye zancitshiswa ngemali kule minyaka idlulileyo, ngakumbi eyabantu abanoncedo oluncinci. Ngo-2013 ezinye ze-125.000 zeentsapho zalahlekelwa luncedo lokurenta, ngelixa kwiminyaka edlulileyo bekungekho njalo.
Akunyanzelekanga ukuba ube nolwazi kakhulu ngalo mbandela ukuze wazi ukuba xa udibanisa ukunqongophala kwezindlu eziqeshisayo kunye nengeniso ephantsi kunye nokusilela koncedo lukarhulumente, sishiywe yimeko echazwe eMelika njenge eyona ngxaki inkulu kwimbali yerenti kwilizwe. Umyinge wemizi echitha ngaphezulu kwesithathu somvuzo wabo kwirente ikhule nge-12% ukusukela ngo-2000.
Namhlanje, isiqingatha sabaseMelika abahlala kwirente bahlawula ngaphezulu kwe-30% yengeniso yabo yenyanga endlwini, ngelixa kukho i-28% abahlawula ngaphezulu kwesiqingatha somvuzo wabo wenyanga. Amaxabiso aqala kwi-1.956 yeedola eSan Francisco ukuya kwi-700 yeedola eLincoln, esinye sezona zixeko zibiza kakhulu eMelika. EWashington, umzekelo, bahlawula umndilili weedola ezili-1.469 kwirente, i-1.454 eBoston, i-1.440 eNew Nork okanye i-1.398 eLos Angeles.
El Ulawulo luka-Obama ijolise kwinxalenye elungileyo yemizamo yayo yokunciphisa le ngxaki inkulu. Ukuza kuthi ga ngoku onke amaphulo akonelanga ukumisa le ngxaki. Kude kube namhla, izigidi zabantu baseMelika azikabinakho nokubanakho ukurenta indlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » indawo yokuhlala » Ingxaki yekhaya eliqeshisayo eMelika
Iingxaki zezoqoqosho zaseFrance kunye noFrançois Hollande